sacuudiga ayaa gantaalo lagu weerarey magaalada Riyadh, Jizan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA sacuudiga ayaa gantaalo lagu weerarey magaalada Riyadh, Jizan
sacuudiga ayaa gantaalo lagu weerarey magaalada Riyadh, Jizan
Difaaca cirka ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa soo qabtay labo gantaal oo ballistic ah oo ka sarreeya caasimada boqortooyada, Riyadh, iyo koonfurta magaalada Jizan, sida uu sheegay afayeen u hadlay isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudiga ee dagaalka kula jira Yemen.
Turki al-Malki, war qoraal ah oo uu soo saaray Wakaaladda Wararka Sacuudiga, wuxuu ku eedeeyay weerarada fashilmay ee lagu qaaday fallaagada Xuutiyiinta Yemen wuxuuna sheegay in gantaaladaasi la burburiyey 23:23 (20:23 GMT) Sabtidii.
Ma jirin sheegasho deg deg ah oo masuuliyadeed, hase yeeshe.
Al-Malki wuxuu sheegay in dhexgalka gantaalaha ay dhalisay “qashin ku daadanaya meelaha qaar guryaha la deggan yahay” ee Riyadh iyo Jizan.
HBS waxay markii dambe tiri “laba qof oo rayid ah ayaa waxoogaa dhaawac ah madaafiicda gantaalaha la is weydaarsaday sababtoo ah waxay ku qarxeen hawada sare oo ku taal degmooyinka la deggan yahay”. Dadka deggan magaalada Riyadh ayaa soo wariyey ugu yaraan saddex qarax oo dhacay dabayaaqadii Sabtida, oo ay ku xigto wiishashka gawaarida gurmadka deg-degga ah qaar ka mid ah degmooyinka waqooyiga.
Telefishinka laga leeyahay Sacuudiga ee Al-Arabiya ayaa sheegay in nidaamyada difaaca gantaalaha Patriot ee Mareykanka loo adeegsaday gantaalada hawada soo galey.
Xulafada uu xulafada la yahay Yemen ee Xuutiyiinta Iran ee dagaalka kula jira isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ayaa bilaabay boqolaal gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha laheyn xuduuda, inta badan bartilmaamed militari iyo rayid oo udhow, laakiin sidoo kale mararka qaar caasimada Riyadh.
Magaalada ayaa qiyaastii 1,000 kiiloomitir (620 mayl) waqooyi ka xigta xadka ay la wadaagto Yemen, iskudaygii ugu dambeeyay ee isku dayga caasimada ayaa ahaa Juun 2018.
Weerarkii ugu dambeeyay ee gantaalaha ayaa yimid kadib markii dhammaan dhinacyada isku haya colaadaha dheer ee Yemen ay khamiistiina taageero siinayeen baaqa Qaramada Midoobay ee xabbad joojinta si shacabka looga ilaaliyo masiibada cudurka coronavirus. Baaqaasi wuxuu ku soo beegmay sanadguuradii shanaad ee faragalinta Sucuudiga ee dagaalka sokeeye ee Yemen, kaas oo ahaa isbahaysi militari oo taageeraya dawladda caalamku aqoonsan yahay ee ka soo horjeedda fallaagada Xuutiyiinta.
Qoraalkiisa, al-Malki wuxuu ku sheegay in gantaalada ay ridayaan waqtigan ay wadaan Xuutiyiinta iyo Ciidamada Ilaalada Kacaanka Iiraan ay muujinayaan khatarta dhabta ah ee kooxda, iyo dowlada Iran oo taageeraysa.
Wuxuu intaas ku daray: “Kordhintan xagjiriinta Xuutiyiinta kama tarjumeyso ku dhawaaqisteedii aqbalaadda xabbad-joojinta iyo kala-goynta, ama wax khatar ah kuma jirin ka-qayb-qaadashada tillaabooyinka kalsoonida iyo in la gaaro xallin siyaasadeed oo dhameystiran xukuumadda Yemen si loo soo afjaro afgambiga. “
Isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa faragaliyay dagaalkii sokeeye ee Yemen ka dhacay sanadkii 2015 si ay isugu dayaan inay soo celiyaan dowladii caalimiga ahayd ee uu madaxweynaha ka ahaa Abd-Rabbu Mansour Hadi, oo ay go’doomisay Xuuthiyiinta sanadkii 2014. weerarada. Waxay kaloo abuurtay qalalaasaha bani’aadamnimo ee dunida ugu xumaa, taasoo keentay in malaayiin la silcayo cunno iyo daawo yaraan.
Dhinacyada dagaallamaya ayaa horay u muujiyay xiisaha dib-u-noolaanshaha, iyadoo sarkaal Sacuudiyaan ah uu sheegay bishii Nofembar in Riyadh ay leedahay “marin furan” oo ay la leeyihiin fallaagada iyaga oo hadafkoodu yahay in la joojiyo dagaalka.
Xuutiyiinta ayaa sidoo kale soo bandhigay in la joojiyo dhammaan gantaalada iyo weerarada diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee laga geysto Sacuudiga kadib weeraradii lagu qaaday xarumahooda shidaalka bishii Sebtember ee lasoo dhaafay, oo ay sheegteen kooxda hubeysan laakiin si weyn ayey ugu eedeeyeen Iran, inkasta oo ay beenisay.
Laakiin dadaalladaasi waxay u muuqdeen kuwo sii daayay. Goobjoogayaasha ayaa sheegaya in fallaagada laga yaabo inay adeegsadaan buundada si ay u xoojiyaan awoodooda militari.
Sami Hamdi, tifatiraha guud ee joornaalka caalamiga ah ee fadhigiisu yahay UK, ayaa sidoo kale ku eedeeyay weerarkii gantaalaha sabtidii lagu qaaday Houthis, isaga oo ugu yeeray “PR PRunt” by fallaagada oo looga golleeyahay “inay u muuqdaan kuwo ka awood badan”.
Isagoo garanaya taageerada Xuutiyiinta xabbad joojinta, iyo sidoo kale dalab ay kooxdu usbuucii hore siisay sii deynta maxaabiis Sucuudiga oo lagu beddelayo xubnaha Xamaas ee Falastiin, Xamdi ayaa u sheegay Al Jazeera: “Tani waa qayb ka mid ah fallaagada PR ee lagu guuleysto aragtida guud ee bulshada Arab ee banaanka jooga. Yemen … Waxay ogaayeen in gantaalku uusan wax dhaawac ah u geysan doonin Riyadh.Waxay ogaayeen in gantaalahaasi aysan wax saameyn militeri ah ku yeelan doonin Sacuudiga, laakiin ujeedku waa in la muujiyo adduunka ‘Eeg sida ay Xuutiyiintu ugu dirayaan gantaalaha Sucuudiga. ‘. “
Iyadoo ay sii kordhayaan dagaalada ka socda Yemen, in kabadan 40,000 oo qof ayaa barokacay ilaa bishii Janaayo, iyaga oo intaa ku daray in qiyaastii 3.6 milyan ay ka carareen guryahooda tan iyo markii uu dagaalku billowday.
Tiro ka mid ah dadkii cararay usbuucyadii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan haween iyo caruur, ayaa cagahooda ku baxsaday, iyaga oo lugeynaya maalmo bilaa cunno ah ama biyo la’aan ah meelaha saxaraha ah, sida lagu sheegay bayaan dhowaan ay soo saartay hay’adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay.
Nidaamka daryeelka caafimaad ee Yemen ayaa jabiyay ilaa iyo hadda lama diiwaan gelinayo cudurka COVID-19, laakiin kooxaha gargaarka ayaa ka digaya in markii ay ku dhufato, saameynta ay ku noqon doonto masiibo dal horey loo arkaayay inuu wajahayo dhibaatada bini’aadannimo ee ugu xun adduunka.
Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ka xanaaqeysa inay xaddido faafidda cudurka guriga. Wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada ayaa ku warrantay 1,203 infekshanno coronavirus ah iyo afar dhimasho ah oo cudurkaas illaa hadda la hayo.
Previous articleKuuriyada Woqooyi oon wax cabsi ah ka qabin Corona … iyada oo “tijaabineysa gantaalo”
Next articleCoronavirus inta uu ku dhacey iyo inta dhimatey Wadan walba Aduunka oo dhan inta la xaqiijiyey, Somaaliya ma ku jirtaa?
Kenya ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo shilkii diyaaradeed ee...